Ny loharanon-kevitra vaovao momba ny fampifanarahana ny fikorontanan'ny toetr'andro momba ny toetr'andro Reef Resilience
Enga anie 2, 2017 | Vaovao
Vao tsy ela akory izay izahay dia nanangana ny maodelim-piaraha-miombon'antoka vaovao momba ny toetrandro miorina amin'ny fiarahamonina izay manaraka ny torolàlana sy fitaovana siantifika farany hanampiana ireo mpitantana hanombanana ny marefo ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ireo fanerena hafa. Nitafatafa tamin'i Lizzie McLeod, mpahay siansa momba ny toetr'andro, hianarantsika ny maha-zava-dehibe ny fanovana toetr'andro sy ny tombotsoan'ny fiaraha-monina. Zahao eto ambany ny resakay!
RR: Nahoana no zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina ny fampifanarahana ny toetr'andro?
EM: Ny fampifanarahana eo anivon'ny fiarahamonina dia manan-danja ho an'ny mpitantana ny vatohara satria, amin'ny tranga maro, ny valinteny eo amin'ny fiarahamonina momba ny fiovan'ny toetrandro dia mitarika hetsika fitantanana izay mikendry ny hiaro ny haran-dranomasina. Ny vatohara dia afaka manampy amin'ny famerenana ny morontsiraka amin'ny fiakaran'ny rivo-doza sy ny fiakaran'ny ranomasina ary ny fiarovana ny jono mpanjono mba hihazonana ny filaminana ara-tsakafo, ka ny fiarovan-tenany dia afaka manampy ny fiarahamonina ho marefo kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo vondrom-piarahamonina izay tsy dia misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy dia mampihetsi-po loatra ny harena voajanahary. Ireo mpitantsoratry ny vatohara dia afaka manampy amin'ny fanasongadinana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina sy ny asa fitantanana laharam-pahamehana mba hiarovana azy ireo. Mety ho azony atao ihany koa ny miditra amin'ny vola fampifanarahana ara-bola izay mety ho manan-danja amin'ny fanohanana tetikasa izay manampy amin'ny fananganana ny faharetan'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka sy ny rafitra momba ny haran-dranomasina.
RR: Inona avy ireo tombontsoa sasany mifandraika amin'ny fampifanarahana amin'ny fiaraha-monina?
EM: Ny fampifanarahana eo anivon'ny fiarahamonina dia ampahany manan-danja amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo vondrom-piarahamonina, indrindra ireo faritra amin'ny vatohara dia matetika eo amin'ny andaniny ny fiovaovan'ny toetr'andro (ohatra, miaina ny tondra-drano sy ny fipoahana avy amin'ny fiakarana an-dranomasina sy ny tafiotra, ny fijanonana amin'ny vatohara, ny fiovan'ny chimie oceans, ny fidinan'ny sira ao anaty loharano, ary ny fiovana ny famokarana hazo sy zaridaina). Ny hetsika fampifanarahana eo anivon'ny fiarahamonina dia mety hiantehitra kokoa amin'ny olana eo an-toerana, ny soatoavina ary ny laharam-pahamehana noho ny hetsika fampifanampiana ambony indrindra ary afaka manome hery ny fiarahamonina mba handraisana sy hiatrehana ny fiantraikan'ny toetrandro. Matetika izy ireo dia manome paikady mahomby amin'ny adihevitra momba ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny fananganana fahalalana eo an-toerana sy ny traikefa mifandraika amin'ny toetrandro sy ny fiovan'ny toetr'andro. Raha ampiharina amin'ny fomba mahomby, dia afaka miantoka koa fa ny fokonolona dia mandray anjara amin'ny dingana rehetra sy ny fampiharana.
RR: Raha misy zavatra tokony ho fantatry ny mpitantana momba ny fanamboarana ny toetr'andro, inona izany?
EM: Na inona na inona fihetsika rehetra eran-tany mba hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro, na dia mihamitombo ny famoahana gazy amam-bary ankehitriny aza, dia mbola hiatrika ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro ny fiarahamonina. Ny mpahay siansa dia manaporofo fa ny onja eny an-dranomasina dia hitohy hivoatra noho ny fiparitahan'ny hafanana ary ny toetrandro dia hanohy hiasa mandritra ny taonjato iray farafahakeliny, raha tsy maharitra, mifototra amin'ny gazy karbonika amin'izao fotoana izao ao amin'ny rivotra sy ny ranomasina. Noho izany, ny ezaka fampifanarahana dia hampitombo ny lanjany eo am-panatontosana ny tanjona napetraky ny Fifanarahana Paris mba hitazonana ny hafanana eto ambany ambany 2 ° C mihoatra ny haavon'ny indostria ary hikatsaka ny ezaka hampihenana ny fitomboan'ny rotsakorana mankany 1.5 ° C.
Manaova fanatanjahan-tena lalindalina kokoa ao anatintsika Fiantohana fampifanarahana ny fiovaovan'ny toetr'andro hahafantatra bebe kokoa!